သိင်္ဂီနွယ်ရဲ့ မှတ်စုစာအုပ်: တစ်ဦးတည်းသော သမီး။
ကျမသည် တစ်ဦးတည်းသော သမီး ဖြစ်ပါသည်။
ထိုသို့ဆိုလျှင် မင်္ဂလာဆောင်ဖိတ်စာကမ်းစဉ်က ဖိတ်စာကို ဖတ်ရင်း ဇဝေဇ၀ါနှင့် အမေးခံခဲ့ရသော မေးခွန်းတစ်ခုကို အမှတ်ရမိပါသည်။ “သမီးတို့က မောင်နှမ သုံးယောက် ရှိတာ မဟုတ်လား”..တဲ့။ “ဟုတ်ကဲ့.. ဒါပေမယ့် ကျမ က သမီးတစ်ယောက်တည်းမို့ တစ်ဦးတည်းသော သမီးပါ..” လို့ အနည်းငယ် ရဲတင်းစွာ ပြန်ဖြေခဲ့မိတာတွေကိုလည်း မှတ်မှတ်ရရ။
ဘယ်သူတွေ ဘယ်လို ဆိုနေပါစေ..ကျမ ဖွင့်ဆိုတဲ့ အဘိဓာန်မှာတော့ ကျမသည် တစ်ဦးတည်းသော သမီးသာ ဖြစ်သည်။ ဒါမှမဟုတ်.. တစ်ဦးတည်းသော အဖြစ်သည် ကျမရင်ထဲ စွဲနစ်နေခဲ့သည်လည်း ဖြစ်ကောင်းဖြစ်ပေလိမ့်မည်။
တချို့သော မောင်များ၍ နှမ တစ်ဦးတည်းသာ ရှိသော နှမများသည် ယောကျာင်္းလေးဆန်စွာ ပွင့်လင်း သွက်လက် ထက်မြက်ကြသည်။ တချို့လည်း သိုဝှက် မျိုသိပ်နေတတ်သူများ ဖြစ်နေကြသည်။ တချို့လည်း မိန်းကလေးသူငယ်ချင်းများကို ခင်တွယ်လွန်းလှသည်...။ တချို့လည်း မိန်းကလေးဖြစ်လျှက် မိန်းကလေးများနှင့် သိပ်ပေါင်းမရ ဖြစ်လာကြသည်။
ကျမသည်လည်း.....။ တခါတရံ ပွင့်လင်းသယောင်ရှိ၍ တခါတရံ မျိုသိပ်နေတတ်သူ ဖြစ်နေတတ်ပြန်သည်။ တခါတရံ သူငယ်ချင်းများကို ညီအစ်မကဲ့သိုို့ ခင်တွယ်တတ်လွန်းသလို တခါတရံတော့လည်း အမျိုးသမီးများ စကားဝိုင်းသို့ ၀င်မဆန့်သူ ဖြစ်ရပြန်ပါသည်။
ကျမနှင့် တစ်နှစ်သာကွာသည့် အစ်ကိုသည် ငယ်ငယ်ကတည်းက မတည့်၊ တကျက်ကျက်နဲ့ ရှိခဲ့ပါသည်။ လေးနှစ်ခန့်ကွာသော မောင်ငယ်ကျပြန်တော့လည်း အစ်မကြီးတယောက်လိုသာ ဖြစ်ပြီး သူငယ်ချင်းလို မရင်းနှီးဖြစ်ခဲ့ပါ။ အလတ်ဖြစ်သော ကျမသည် အကြီးကို ဦးစားပေးသော မိသားစုဝင်ဖြစ်လာရကာ တစ်ခုခုဆို အကြီးကိုဦးစားပေး၍ အငယ်ကိုကျ ညှာတာရပြန်ပါသည်။ တစ်နှစ်သာ ကွာပေသည့် ကိုကိုသည် အခွင့်ထူးခံဖြစ်ခဲ့သည်ကို ကျမ မနာလိုမရှုစိမ့် ဖြစ်ခဲ့ဟန်တူပါသည်။ ဒါမှမဟုတ် အနိုင်ကျင့် ဗိုလ်ကျခံရတာကို မတရားဟု ထင်မြင်ကာ မကျေနပ်ခဲ့တာလည်း ဖြစ်နိုင်သည်ပဲလေ။ ကျမမှာ မကျေနပ်တာကို ပြန်ပြောဖို့ အခွင့်မရှိခဲ့ပါ... ကျမသည် သမီးအလိမ္မာသာ ဖြစ်ချင်ခဲ့သည်ကိုး။
သို့နှင့်.. ငယ်စဉ်ကတည်းက ကျမ၏ အဖော်သည် ဗလာစာအုပ်တွေထဲက နာကျည်းပေါက်ကွဲမှု စာလုံးတွေ ဖြစ်လာခဲ့သည်။
ကျောင်းတွေတက်ပြီး သူငယ်ချင်းတွေ ရလာတော့လည်း ကျမ ခံစားချက် နက်နက်ရှိုင်းရှိုင်းတွေကို မဖွင့်ပြတတ်သလို မတိုင်ပင်တတ်တော့ပါ။ မထိန်းမသိမ်းနိုင်အောင် လျှံကျလာတာမျိုး၊ ဒါမှမဟုတ်.. ဟန်ဆောင်မှုမှာ ညံ့ဖျင်းတဲ့ ကျမကြောင့် သိသာထင်ရှားနေတာမျိုးဆို သူတို့ သိနိုင်ပေမည်။ ကျမအကြောင်းတွေကို သူငယ်ချင်းတွေကို ပြောလို့ သူတို့တတွေ အားနာပါးနာ နားထောင်နေရမှာကို အားနာလှသည်။ ကျမ ခံစားချက်တွေ ရင်ဖွင့်ရမှာ သိမ်ငယ်သလို ခံစားမိသည်။ ဒါမှမဟုတ် မလုံခြုံသလို ခံစားရတာလည်း ဖြစ်ကောင်းဖြစ်မည်။
အမှန်တကယ်တော့.. ညီအစ်မဆိုတဲ့ သွေးသားတော်စပ် ခံစားမှုမျိုး ကျမ မသိခဲ့တာ ဖြစ်လိမ့်မည်ဟု ထင်သည်။
မေမေသည် သူ့ညီမနှင့် နေ့စဉ် ဖုန်းဆက်ကြသည်။ တစ်ရက်ကျော်ခန့် အဆက်အသွယ်ပြတ်လျှင်ပင် စိတ်ပူတတ်ကြသည်။ သူတို့ ညီအစ်မအချင်းချင်း ရင်တွင်းစကားတွေ ရင်ဖွင့်တိုင်ပင်ကြသည်။ အချင်းချင်း အားပေးကူညီကြသည်။ တခါတလေ အကြောင်းမတိုက်ဆိုင်လျှင် စိတ်ကောက်ကြမည်။ ပြီးလျှင်တော့ ဒီညီအစ်မနှစ်ယောက်ပဲ တိုးတိုးဖော်ဖြစ်ကြပြန်သည်။ သူတို့ ယောင်းမ အတင်း တိုးတိုးတိတ်တိတ် ဆိုကြမည်။ သူ့ဘက် ကိုယ့်ဘက် သားသမီးတွေအကြောင်း ဖလှယ်ကြမည်။ ပြီး... နှုတ်လုံလှစွာ.. ထိန်းသိမ်းတတ်ကြသည်။ သားအမိချင်းသည်ပင် သူတို့ညီအစ်မလောက် ရင်းရင်းနှီးနှီး နွေးနွေးထွေးထွေး ပြောစရာ စကားမရှိခဲ့။
ကျမတွင် ဟိုဘက် သည်ဘက် သမီးယောင်းမ နှစ်ယောက်စီ ရှိကြပါသည်။
သမီးယောင်းမတို့၏ ထုံးစံအတိုင်း စကား မလွန်သွား၊ မမှားသွားရလေအောင် ဆင်ခြင်စီစစ်ပြီးမှ ပြောရပါသည်။ ထိုအချက်သည် ကျမအတွက်တော့ ထွေထွေထူးထူး ထိန်းသိမ်းနေစရာ မလိုပါ။ ကျမနှင့် အဆင်ပြေသော သူများသာဖြစ်၍လည်း အခက်အခဲမရှိလှပါ။ ခက်သည်က အခုတလော ကျမအတွက် ညီမ သို့မဟုတ် အစ်မ တစ်ယောက်လောက် လိုချင်နေခြင်းပင်ဖြစ်သည်။ ဘယ်သူတွေ ဘယ်လိုပဲ ရင်းနှီးတယ်ပြောပြော သွေးသားရင်းချာ ညီအစ်မတွေလောက်တော့ ရင်းနှီးလိမ့်မည် မဟုတ်ဟု ထင်နေပြန်ပါသည်။ အစ်မဖြစ်သူ ဆေးရုံပေါ်မှာ သမီးဇောနဲ့ စိတ်ရှုပ်နေချိန်မှာတောင် အဝေးတနေရာမှ အိမ်တွင်းရေးပြဿနာကို ရင်ဖွင့်လို့ ရသည့် ညီမရဲ့ အဖြစ်ဟာလည်း ကျေနပ်စရာပဲလေ။ ဒါမှမဟုတ်... ဒုက္ခသောကတွေနှင့် လူမှုရေးအခက်အခဲတွေ ကြားထဲမှ ညီမကို အားပေးလို့ ရနေခဲ့တဲ့ အစ်မတစ်ယောက်ရဲ့ နှစ်သိမ့်အားပေးမှုကလည်း လိုအပ်တဲ့ အရာပဲ မဟုတ်ပေဘူးလား။
ကျမသည် တစ်ဦးတည်းသော သမီး အဖြစ်ကို ဆက်လက်၍ ခေါင်းမာစွာ ဆုပ်ကိုင်ထားဆဲ......။
Posted by tg.nwai at 4:42:00 AM
"သို့နှင့်.. ငယ်စဉ်ကတည်းက ကျမ၏ အဖော်သည် ဗလာစာအုပ်တွေထဲက နာကျည်းပေါက်ကွဲမှု စာလုံးတွေ ဖြစ်လာခဲ့သည်။ "
"ဘယ်သူတွေ ဘယ်လိုပဲ ရင်းနှီးတယ်ပြောပြော သွေးသားရင်းချာ ညီအစ်မတွေလောက်တော့ ရင်းနှီးလိမ့်မည် မဟုတ်ဟု ထင်နေပြန်ပါသည်။"
အမ...ကိုယ့်မှာရှိတဲ့ အခင်ဆုံး သူငယ်ချင်းကို ရင်ဖွင့်လိုက်တာ ပိုကောင်းပါတယ်။
အခုတော့လဲ ... တခါတလေ တမ်းတမိတာက လွဲလို့.. နေတတ်အောင်နေနိုင်အောင်.. ကိုယ့်ရဲ့ သူငယ်ချင်း ထက်ပိုခင်တဲ့ သူငယ်ချင်းဆီမှာ.. ရင်ဖွင့်လိုက်ပါတော့တယ်..။
ဘဝမှာ မိသားစုဆိုတာ ဘယ်သူမှ ရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်မရှိခဲ့ဘူးးအမ..။ ဘဝအဖော်ဆိုတာတောင် ကံတရားက သတ်မှတ်ပေးပီးသားကိုးး
ကိုယ်ရွေးချယ်ခွင့်ရှိတာ အသေအချာဆုံးက ကိုယ့် သူငယ်ချင်းပါပဲ..။
တစ်ဦါ်တည်သော သမီးဖြစ်သလို ချစ်သူရဲ့ တစ်ဦးတည်းသောဇနီးလည်းဖြစ်ပါသည်။း)
တခါတလေလည်း ကျွန်တော်က အနိုင်ကျ..
ပျင်းရင်ကိုယ့်အောက်က မောင်နဲ့လည်း ဖုန်းအမြဲပြောဖြစ်ပါတယ်..(၁နာရီလောက်..ဟီးး)
ရင်တွင်းစကားကို အမေနဲ့လည်း ပြောဖြစ်ပါတယ်..( အမြဲလိုလို..)
ညီမတော်ချင်တယ်ဆို ပြန်လာခဲ့မယ် .. အတည်း))
ညီမတွေ အစ်မတွေ လိုချင်လွန်းလို့ ငယ်ငယ်ထဲကမေမေ့ကိုပူစာခဲ့တာလေ မရခဲ့ပါဘူး သူငယ်ချင်းရယ်။
ဒါပေမဲ့တဦးတည်းသောသမီးအဖြစ်နဲ့တော့ ခေါင်းမာပြီး နေမနေပါနဲ့နော်။ စိတ်လျှော့ပြီးအကောင်းမြင်လိုက်ပါ ပေါ့သွားလိမ့်မယ်ထင်တာပဲ။ ဟီးဟီးဆရာလုပ်ကြည့်တာ။
မရေ- ကိုယ်ချင်းစာ တယ်လို့ ပြောလို့မရပေမဲ့..နားလည်ပါတယ်။ ဘာလို့ဆို..ကျမမှ ညီအမတွေ..လက်တဖက် မက ရှိနေလို့..
မပူပါနဲ့လေ..သမီးကြီးရင်.. Buddy လေး ဖြစ်မှာပါ။
မသိင်္ဂီ အသစ်ရေးပါဦးလို့ ပူဆာမလို့လာတာ... အသစ်ဖတ်ရလို့ ကျေးဇူးပါ။ အမကို ကိုယ်ချင်းစာတယ်။ အရမ်းခင်ရတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေ ရှိရင် သူတို့ကို ညီမ အမတွေလို့ သဘောထားပြီး ရင်ဖွင့်ပေါ့ အမရယ်။ အဝေးမှာ ရောက်နေတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေကို ပြောထားတယ်။ စိတ်ညစ်စရာ ရှိရင် ပြောလို့ရတယ်လို့။ တယောက်အပူ တယောက် ဒီလိုပဲ ဝေမျှရတာပဲ အမရယ်။
ညီမလည်း တဦးတည်းသော သမီးပဲ
တချို့အကျင့်တွေ တူတယ် သိလား အစ်မး)
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ပျော်ပါစေနော် ..း)
စူးရေ>>> ဟုတ်ပါတယ်...ဒါကတွေ ရှေးက ကံအတိုင်းပေါ့လေ...လက်ခံပါတယ်လေ.. တခုခုဖြစ်ရင်လည်း ပြောလို့ ဆိုလို့ ရင်ဖွင့်လို့ရတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေရှိတဲ့ အတွက်လည်း ၀မ်းသာခဲ့ပါတယ်။ ကျေးဇူးပါ စူးရယ်..။
မွန်၊ ပေါက် >>> အွန်လိုင်းပေါ်က ကောက်ရတဲ့ ညီမလေးတွေလေ.. ချစ်ဖို့ သိပ်ကောင်းပေါ့..ဟဲဟဲ
မနော်>>> တကယ်လားဟင်။ ပြန်လာခဲ့နော်..နောက်တော့မှ...ဟဲဟဲ
TK>>> အတူတူပဲလေ..ငါ ငှားထားတဲ့ နားကတော့ Idle ဖြစ်နေတာဟ။
K >>> အားကျမိတဲ့ အထဲမှာ ကေလည်း ပါတယ်လေ..ကေ ပို့စ်တွေထဲမှာ ညီအစ်မတွေ ချစ်ချစ်ခင်ခင် ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နေကြတာတွေ ဖတ်မိတိုင်း ပျော်စရာကြီးပဲလို့ တွေးမိတယ်.. ကျေးဇူးပါ ကေ ရေ...နားလည်ပေးလို့ပါ။
မီယာ >> မီယာရေ.. ကျေးဇူးနော်. တခါတလေကျ အဲလိုပါပဲ..အခုတော့ စိတ်နဲ့ ကိုယ်နဲ့ အဆင်ပြေနေပြန်ပါပြီ..:)
မိုးခါး>>> အဟဲ..ဟုတ်လား.. အဖော်ရပြီ..ဒါကြောင့် မိုးခါးကို ခင်နေတာ ဖြစ်မယ်..ဟဲဟဲ... ပေးတဲ့ဆုနဲ့ ပြည့်ချင်ပါတယ် ညီမရေ...
အစ်မရေ ညီမတို့ကတော့ ညီအစ်မနှစ်ယောက်ပဲရှိတယ် ..အစ်မတော်မယ်လေ နော် ဟိဟိ
မီးမီးလည်း တဦးတည်းသော သမီးပါ မေမေရှင့်
အန်တီတာ (မီးမီးကြည်လင်ထက်မြတ် - ကိုယ်စား)
ညီမလေး မဆုမွန်>>> ကဲ..ကြည့်ပါဦး..ညီမလေး နောက်တယောက်တိုးလာပြီနော်..ဟဲဟဲ..
သီတာ>>> ဟုတ်တယ် သီတာရေ..အကိုတွေကလည်း သူ့ကို ချစ်ကြပါတယ်။ သူ့အကိုငယ်နဲ့ သူက ကစားဖော်ကစားဖက်။ နောက်ပြီး..သူက အိမ်မှာ ဦးစားပေးခံရတဲ့သူလေ..အငယ်ဆုံးပေမယ့် ဗိုလ်အကျဆုံးဆိုတော့ သူကတော့ အစ်ကိုတွေကတောင် လိုက်ဆွဲနေရမယ့် တဦးတည်းသော သမီးဖြစ်မှာ..:)
မ ရေ… ငယ်က တဦးတည်းသောသမီးမဟုတ်ပေမယ့် တင်းကျပ်လွန်းတဲ့စည်းကမ်းတွေကြောင့် အဲလို ဗလာစာအုပ်ပေါ်ရင်ဖွင့်ခဲ့ဖူးတယ် သိလား မ… ဒီပို့ စ်လေးဖတ်ပြီး သားအတွက် အဖော်လေးတယောက်မွေးချင်စိတ်တောင်ပေါက်သွားတယ် မ ရယ်… ဒါပေမယ့် မ ရယ်.. တခါတလေကျတော့လဲ မောင်နှမသားချင်းတွေ ညီအမတွေ ရှိပြီး အထီးကျန်နေသူတွေလဲ ရှိကြတယ်… ဒါကြောင့် နဘေးမှာ မေ့ဆေးလေးရှိနေတဲ့ ဘ၀ကို ကျေနပ်လိုက်နော်… ပြီးတော့… ဒီက ညီမလေးကို မမေ့ပါနဲ့မ ရေ… ဒီဘ၀မှာ ခုလို ဆုံတွေ့ ခွင့် ခင်မင်ခွင့်ရတာ ဟိုဘ၀က ညီမအရင်းတွေဖြစ်နေခဲ့ရင် ဖြစ်နေခဲ့မှာပေါ့… မ ရေ… ရင်ဖွင့်စရာရှိရင် အီးမေးလ်ပို့ လိုက်နော်… ဖေ့စ်ဘွတ်ထဲကလဲ ရတယ်… ဒီတခေါက်ပြန်လာရင် ဆုံဖြစ်အောင်ဆုံကြတာပေါ့… ဘ၀အမောတွေ ဝေမျှဖို့ လေ… ပျော်ရွင်စရာတွေလဲ ပါတာပေါ့…
Do know sometime "very noisy"? ha ha
Epal Tin said...
အတူတူပါပဲ... ဒီကလည်း အစ်ကိုတစ်ယောက်၊ မောင်တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ဦးတည်းသောသမီး... ပွင့်လင်းသလိုလို သိုသိပ်တယ်... ကျားမဆန် မ မကျနဲ့နေပါတယ်... ကိုယ်ချင်းစာပါတယ်.. တကယ်... ရင်ဖွင့်ဖော်အရင်းနှီးဆုံးလူသားတစ်ယောက်တောင့်တတဲ့ ခံစားချက်ကို နက်နက်နဲနဲခံစားဖူးပါတယ်...